सान्जेन र रसुवागढीको आईपीओ बल्ल सूचीकृत हुने भयो - Aarthiknews
सान्जेन र रसुवागढीको आईपीओ बल्ल सूचीकृत हुने भयो
काठमाडौं । वैशाख १९ गते नै सर्वसाधारणलाई शेयर बाँडफाँट गरेका सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर सोमबार सूचीकृत हुने भएको छ । सोमबार दुबै कम्पनीको शेयर सूचीकरण सम्झौताको कार्यक्रम तय भएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रबक्ता मुराहरी पराजुलीले सोमबार दुबै कम्पनीको शेयर सूचीकरण हुने हुँदा सर्वसाधारणहरुले मङ्गलबारदेखि कारोबार गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
सोही व्यवस्था अनुसार स्थानीयको शेयर लकइन अवधि कहिलेदेखिको हुने भन्नेमा स्पष्ट नहुँदा दुबै कम्पनीको शेयर सूचीकरणमा ढिलाई भएको थियो । कर्मचारीहरुको शेयरको हकमा सर्वसाधारणलाई शेयर बाँडफाँट भएको मितिदेखि र स्थानियको हकमा स्थानियलाईनै शेयर बाँडफाँट गरेको मितिदेखि तीन वर्षको अवधि लकइन रहने व्यवस्था गरिएको रसुवागढी कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेले जानकारी दिए । दुई चरणमा कर्मचारीहरुका लागि आईपीओ जारी गरेका दुबै कम्पनीहरुले २०७४ चैत १८ गते कर्मचारीहरुलाई शेयर बाँडफाँट गरेका थिए ।
पहिलो चरणमा कर्मचारीहरुलाई शेयर बाँडफाँट पश्चात दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई आईपीओ जारी गर्ने योजना कम्पनीहरुको थियो । तर २०७२ सालको भूकम्पले प्रभावित रसुवाका स्थानीयले त्यो समयमा पुनर्निर्माण कार्य गरिरहेको अवस्थामा शेयरमा लगानी गर्न असमर्थ भएको भन्दै निष्कासन प्रक्रिया पछाडि सार्न आग्रह गरेपछि कम्पनीहरुले त्यो व्यवस्था मिलाएका थिए ।
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीको रूपमा रहेका यी दुवै कम्पनीले पहिलो चरणमा वितरण गरेको २४ प्रतिशत शेयरमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताका लागि १९ दशमलव ५ प्रतिशत, संस्थापक संगठित संस्था (चिलिमे हाइड्रो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, रसुवाका स्थानीय निकाय)का कर्मचारीका लागि ३ दशमलव ५ प्रतिशत र ऋणदाता संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीका लागि १ प्रतिशत छ ।
रसुवामा सान्जेनले १४ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सान्जेन र ४२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको सान्जेन गरी दुई आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै रसुवागढी आयोजनाको क्षमता १११ मेगावाट छ । यी आयोजना चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीअन्तर्गत निर्माण भइरहेका छन् । रसुवागढीको निर्माणाधीन आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत रू. १५ करोड १२ लाख २४१ छ भने सान्जेनको दुवै आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत रू. १५ करोड छ ।
यी दुवै कम्पनीले जारी पूँजीको आधारमा संस्थापकतर्फ ५१ प्रतिशत, कर्मचारीमा २४ प्रतिशत, सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत र स्थानीयका लागि १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गरेका छन् । सान्जेनको जारी पूँजी रू. ३ अर्ब ६५ करोड छ भने रसुवागढीको ६ अर्ब ८४ करोड २१ लाख छ ।